Nijeriya: culayska dagaalka lagula jiro B/Haram ku hayo nolosha dadka – Kasmo Newspaper
Nijeriya: culayska dagaalka lagula jiro B/Haram ku hayo nolosha dadka
Updated - July 19, 2017 3:14 pm GMT
London (Kasmo), Boko Haram oo ka mid ah ururrada jihaadiga ah ee ugu awoodda badan dunida wali waxay waddaa kharbudaadda iyo laynta dadka, waxaana u dambaysay weerarkii 2 maalmood ka hor dhacay.
Haweeney isa soo miidaamisay ayaa 17kii July ku dishay 8 qof Masjid ku yaalla Maiduguri, kaas oo gabi ahaantiiba, qarixii dartiis, isku soo dul habsaday, waxaana ku dhaawacmay 15 kale.
Tillaabooyinka Xukuumaddu ka qaadday si looga hortago Kooxdaas waxay culays weyn ku hayaan dhaqaalaha maxalliga ah.
Hilary Matfess waa War-fiyeen madaxbannaan iyo Cilmi-baare ka tirsan “Institutre for Defense Analyses”, xubinna ka ah “Nigeria Social Violence Research Project” ee Hopkins University’s School of Advanced International Studies, waxayna maqaal ay ku baahisay wargayska “Foreign Affairs” ku sharraxaysaa sida kacdoonka Boko Haram u naafeeyay qaybo idil oo ku dhow Harada Chad, woqooyiga Nijeriya.
Sannadkii 2016kii Bangiga adduunka wuxuu khasaaraha la xiriira duqaynta iyo dagaallada kooxda ee aaggaas oo qur ah ku qiyaasay $6 Bilyan oo Dollar, taasi oo si muuqata u saamaysay nolosha dadka dhulkaas.
Maamulka harada Chad waxaa ku adkaatay in dhaqaalaha la hormariyo iyada oo an Boko Haram la siin fursad ayan, sida daris-ku-noolaha, ganacsigeeda sharci-darrada ah uga faai’deysan, horumarka dhaqaalaha sharciga ah.
Matfess waxay ka digaysaa sida tillaabooyinka xukuumaddu ku beegsanayso kooxdaas u sii culaysinayaan xaaladda, iyada oo ganacsiga kooxdu ku milmay dhaqaalaha maxalliga ah. Xukuumaddu waxay bishii March 2016kii xirtay sayladdii xoolaha Maiduguri, tillabadaas oo shaqo la’aan dhigtay boqollaal dad ah.
Boko Haram oo shuddada ka wadda dalkaas laga soo bilaabo 2009kii waxay galaafatay nolosha dad gaaraya 20,000, wxayna barakac ku ridday dad 2,6 malyuun gaaraya. Dagaallada, afduubka iyo kufsigu waxay muddadaa oo idil ahaayeen kuwo si joogto ah u dhaca, gaar ahaan dadka rayidka ah ee an waxba galabsan.
Bishii April 2014kii kooxdu waxay qafaalatay 200 oo gabdhood oo arday ahaa, kuwaas oo qaarkood lagu khasbay in ay isku qarxiyaan suuqyada waaweyn iyo meelaha dadku ku badanyahay.
Bishii Disembar ee hore Madaxweyne Muhammadu Buhari wuxuu ku dhawaaqay in ciidankiisu la wareegay saldhiggii u dambeeyay ee Boko Haram ku lahayd Woqooyi-bari Gobolka Borno. Waxaa xigtay in bishii Jenaayo 2017kii kooxdu beenisay in la jabiyay, intii ka dambaysayna waxaa socda weerarro halis ku haya nabadgalyada dalkaas.